Archive du 15-avril-2022
Mihenjana ny tady
Miantso fikaonan-doha ny mpanohitra. Tsy misy mandeha irery intsony izany manomboka eto ka hoe izahay vondrona Panorama na vovonana RMDM na antoko politika Otrikafo na FLN sy izay tsy voatonona hafa rehetra fa dia hoe
Fanenjehana, fanagadrana,… Mahita faisana izay azon’ity Fitondrana ity
Notondroina sy nosoketaina ho Filoha mpanao jadona ny Filoha teo aloha Marc Ravalomanana, ary natao fitaovana nentina nanonganana azy mihitsy izany.
SEMPOTRA NY VAHOAKA HO ZAVA DOZA RAHA MITROATRA
Sempotra tanteraka tsy misy iantsapazana ny vahoaka Mihasarotra andro aman’alina ny fiainana, miha midangana hatrany ny vidim-piainana, tsy mahavaha olana ny Fanjakana,...
Ny andrasana amin’ny fitondrana Maneho ny heviny ny olom-pirenena
Tokony hifantoka amin’ny tena laharam-pahamehana, tsy misy ho antenaina aminy intsony, hafa ny lazain’ny vava, hafa ny ataon’ny tanany.
Zava-doza tany Toamasina Nongotana ny sofina sy maso ary ny maha lehilahy ilay zaza
Zazalahy kely iray vao 9 taona monja no fantatra fa nanjavona rehefa nilalao teo an-tokontany tany Toamasina.
Fanolanana zaza kamboty Nadoboka am-ponja vonjimaika ilay mpiandry
Nadoboka am-ponja vonjimaika omaly eny amin’ny fonjaben’Antanimora ilay Rangahy voalaza fa mpiandry sy ny zanany lahy nanolana ilay tovovavy kely iray efa kamboty vao 21 taona
Kofona tanteraka ny fitondrana Hangata-bola any amin’ny FMI sy BM indray
Tao anatin’ny andro vitsy no niely ny resaka fa nahazo fampanantsoana any amin’ny Tahirim-bola iraisam-pirenena (FMI)
Jessica mpanotra Nodimandry omaly rehefa avy notsaboina
Nodimandry omaly Alakamisy maraina i Jessica mpanotra rehefa niala nenina teny amin’ny hopitaly.
Fanjakana Rajoelina Miantso fitoniana sady mietraketraka ihany
Niantso fitoniana ny Fanjakana ka fanambara ny Talen’ny Seraseran’ny Fiadidian’ny Repoblika sady mpitondra tenin’ny Filoha Rtoa Lova Hasinirina Ranoromaro omaly,
Aretina goty Ny saofera no tena betsaka voany
Fotoana fihetsehan’ny goty izao andro manomboka mangatsiaka izao. Vokatry ny fihinanana sakafo matsiro loatra no tena mahatonga ity aretina ity raha araka ny fanazavan’i Rija Mandimbison,
Dany Rakotoson “Alamino aloha ny antokonao”
Rehefa te hanova zavatra hoy i Karl Marx dia alaivo aloha ny fitondrana, hoy ny fanazavan’ny mpandinika raharaham-pirenena,
Hajo.A sy ny MMM Lasa fatra-mpitsikera fitondrana
Lasa fatra mpitsikera fitondrana. Izay raha fehezina ny fahitan’ny gazety iraisam-pirenena, Africa Intelligence, ny politikan’ny filohan’ny antoko politika Malagasy Miara-miainga na MMM
SOS Village d’enfants Nanampy ireo toerana fitaizana zaza kamboty
Miezaka hatrany manampy ireo ankizy sahirana sy kamboty eto amintsika ny fikambanana SOS Village d’enfants.
Navotsotra vonjimaika i Clémence Tsy voahaja intsony ny fahalalana haneho hevitra
Vao maraina dia efa nigadona teny amin’ny Sampana fanadihadiana momba ny heloka bevava teny amin’ny Tobin’ny zandary teny Fiadanana i Clémence Raharinirina.